35. Kungani uNkulunkulu eyobeka labo abenqaba ukwamukela uNkulunkulu uSomandla phakathi kwezinhlekelele? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
35. Kungani uNkulunkulu eyobeka labo abenqaba ukwamukela uNkulunkulu uSomandla phakathi kwezinhlekelele?
Okwedlule: 33. Kuyini ukuhlwithwa ngaphambi kwenhlekelele? Uyini umnqobi owenziwa ngaphambi kwenhlekelele?
Okulandelayo: 37. Yini ukuguquka kwesimo somuntu?